Crash Bandicoot တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းအသစ် - the Run on! | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Jordi Gimenez | 26/04/2021 22:00 | အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအက်ပလီကေးရှင်းသို့လာသည့်ဒီဖျော်ဖြေမှုနှင့်ဝါရင့်ဂိမ်းငါအသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်၌တည်၏ ဗားရှင်း 1.10.28 ထို့အပြင်ဂိမ်း၏အစတွင်ပိုမိုသောဒြပ်စင်များထည့်သွင်းခြင်း၊ chat filter အတွင်းပြုပြင်ခြင်းများနှင့်ယခင်ဗားရှင်းတွင်တွေ့ရှိရသောအမှားပြင်ဆင်ခြင်းများ update သည်သင်ဤ update သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် marsupials ဖြစ်သည်ကိုသင်ဖတ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဆက်နွယ်နေသောအပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုများစွာကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ဒီဂိမ်းကို App Store မှာအခမဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီဗားရှင်းအသစ်မှာတွေ့ရှိတဲ့အမှားအယွင်းများစွာကိုပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်အများဆုံးဝါရင့်အရာ၌ဤဂိမ်းကိုသိကြလိမ့်မည် နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်သည့်အထိအောင်အောင်မြင်မြင်ရောက်ရှိလာသောပန်းသီးများကိုလုံခြုံစိတ်ချ။ ခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဂိမ်း၏ဒိုင်းနမစ်ရိုးရှင်းပြီးမည်သည့်အသုံးပြုသူလုပ်နိုင်သည် ပြေးလမ်း၊ ခုန်ခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့်လမ်းတွင်တွေ့ရသောအရာဝတ္ထုများကိုချိုးဖောက်ခြင်းတို့ကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားပါ သငျသညျဆိုးရွားသောဆရာဝန် Neo Cortex ၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ရန်သူ henchmen ရောက်ရှိသည်အထိ။
PlayStation တွင်ကစားဖူးသူများထက် ကျော်လွန်၍ အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပျော်ရွှင်စရာများနှင့်နာရီပေါင်းများစွာဖျော်ဖြေရေးအတွက်ပေးသောပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်း၏ဗားရှင်းမှာတော့ Nina Cortex, Dingodile, Doctor N. Gin, Crash Fake, Coco Fake နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောက်မျက်များကိုခိုးယူသောအခြားလူကြမ်းများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး » Crash Bandicoot တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းအသစ် - အပြေးတွင်!